आइपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने १० खेलाडी – korea pati
March 21, 2020 LeaveaComment on आइपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने १० खेलाडी
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) १३ औं संस्करण आगामी वैशाखमा हुँदै छ । सन् २००८ देखि सुरु भएको आइपिएल हालसम्म आउँदा विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय फ्रेन्चाइज लिग बनेको छ । हरेक खेलाडीको पहिलो रोजाईको ब्यवसायिक लिग मानिन्छ ।आइपिएल इतिहासमा एकै इनिङमा सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान विराट कोहली कप्तान रहेको रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको नाममा छ । बेंगलोर सन् २०१३ मा पुने वारियर्सविरुद्ध निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै २ सय ६३ रन बनाएको थियो ।
उक्त खेलमा क्रिस गेल ६६ बलमा १७ छक्का र १३ चौका सहित १ सय ७५ रनमा अविजित रहेका थिए ।यद्यपि आइपिएलमा सबैभन्दा कम योगफल पनि बेंगलोरकै नाममा छ । बेंगलोर २०१७ मा कोलकाता नाइट राइडर्सविरुद्ध ९.४ ओभरमा ४९ रनमा अल आउट भएको थियो । आइपिएल इतिहासमा सर्वाधिक रन बनाउने १० खेलाडी र तीनले बनाएको रन यस प्रकार छ ।
१०. गौतम गम्भिर:-भारतीय टोलीका पुर्व ओपनर गौतम गम्भिरले दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता दुबैको कप्तानी गरे । कोलकाताले सन् २०१२ र २०१४ मा उपाधि जित्दा गम्भिर कप्तान थिए । सन् २०१८ मा गम्भिरले दिल्लीबाट सन्न्यास लिए । गम्भिरले १ सय ५२ इनिङमा ३६ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार २ सय १७ रन बनाएका छन् । जसमा ४ सय ९१ चौका र ५९ छक्का सामेल छ । उत्कृष्ट प्रर्दशन ९३ छ ।
९. एबि डी भिलियर्स:-दक्षिण अफ्रिका विश्फोटक ब्याट्सम्यान एबि डी भिलियर्सले बेंगलोरबाट आइपिएल खेल्ने गर्दछन् । उनले १ सय ४२ इनिङमा ३ शतक र ३३ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार ३ सय ९५ रन जोडेका छन् । जसमा ३ सय ५७ चौका र २ सय १२ छक्का सामेल छ । उत्कृष्ट प्रर्दशन १ सय ३३ रन अविजित छ ।
८. रोविन उथप्पा:-कोलकताका ओपनर रोविन उथप्पाले १ सय ७० इनिङमा २४ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार ४ सय ११ रन बनाएका छन् । जसमा २४ अर्ध शतक, ४ सय ३५ चौका र १ सय ५६ छक्का सामेल छ । ८७ रन उत्कृष्ट प्रर्दशन हो ।
७. महेन्द्र सिंह धोनी:-भारतीय क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल कप्तान महेन्द्रसिंह धोनीले आइपिएलमा १ सय ७० इनिङमा २३ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार ४ सय ३२ रन बनाएका छन् । चेन्नई सुपर किंग्सलाई तीन पटक उपाधि दिलाएका धोनीले २ सय ९७ चौका र २ सय ९ छक्का प्रहार गरेका छन् । ६५ पटक अविजित रहेका धोनीको उत्कृष्ट प्रर्दशन ८४ रन अविजित छ ।
६. क्रिस गेल:-वेस्ट इन्डिजका विश्फोटक ब्याट्सम्यान क्रिस गेल हाल आइपिएल किंग्स इलेभेन पञ्जावबाट खेल्ने गर्दछन् । बेंगलोरबाट लामो समय आइपिएल खेलेका गेलले १ सय २४ इनिङमा ६ शतक र २८ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार ४ सय ८४ रन बनाएका छन् । जसमा ३ सय ६९ चौका र ३ सय २६ छक्का प्रहार गरेका छन् । उत्कृष्ट प्रर्दशन १ सय ७५ रन छ । गेल आइपिएलमा सर्वाधिक छक्का देखी एकै इनिङमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने ब्याट्सम्यान हुन् । गेलको नाममा थुप्रै कीर्तिमान रहेका छन् ।
५.शिखर धवन:-भारतीय तथा दिल्ली क्यापिटल्सका ओपनर शिखर धवनले १ सय ५८ इनिङमा ४ हजार ५ सय ७९ रन बनाएका छन् । जसमा ३७ अर्ध शतक, ५ सय २४ चौका र ९६ छक्का प्रहार गरेका छन् । जसमा उत्कृष्ट प्रर्दशन ९७ रन अविजित छ ।
४. डेविड वार्नर:-अष्ट्रेलिया तथा सनराइजर्स हैंदराबादका ओपनर डेविड वार्नरले १ सय २६ इनिङमा ४ शतक र ४४ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार ७ सय ६ रन बनाएका छन् । जसमा ४ सय ५८ चौका र १ सय ८१ छक्का सामेल छ । उत्कृष्ट प्रर्दशन १ सय २६ रहेको छ । उनले आफ्नो कप्तानीमा सन् २०१६ मा हैंदराबादलाई च्याम्पियन बनाएका थिए ।
३. रोहित शर्मा:-भारतीय ओपनर तथा मुम्बई इन्डियन्सका कप्तान रोहित शर्माले १ सय ८३ इनिङमा १ शतक र ३६ अर्ध शतक सहित कुल ४ हजार ८ सय ९८ रन बनाएका छन् । जसमा १ शतक र ३६ अर्ध शतक सामेल छ । ४ सय ३१ चैका र १ सय ९४ छक्का प्रहार गरेका छन् । उत्कृष्ट प्रर्दशन १ सय ९ रन छ । रोहित आइपिएलमा उपाधिको हिसाबमा सर्वाधिक सफल कप्तान हुन् । उनको कप्तानीमा मुम्बई ४ पटक च्याम्पियन बनेको छ ।
२. सुरेश रैना:-चेन्नईका शीर्षक्रममा ब्याट्सम्यान सुरेश रैना आइपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीमा दोस्रो स्थानमा छन् । उनले कुल १ सय ८९ इनिङमा १ शतक र ३८ अर्ध शतक सहित कुल ५ हजार ३ सय ६८ रन बनाएका छन् । जसमा ४ सय ९३ चौका र १ सय ९४ छक्का सामेल छ । उत्कृष्ट प्रर्दशन एक सय छ ।
१. विराट कोहली:-भारतीय टोली तथा बेंगलोरका कप्तान विराट कोहली आइपिएलमा सर्वाधिक रन बनाउने सुचिमा शीर्ष स्थानमा छन् । कोहलीले १ सय ६९ इनिङमा ५ शतक र ३६ अर्ध शतक सहित कुल ५ हजार ४ सय १२ रन जोडेका छन् । जसमा ४ सय ८० चौका र १ सय ९१ छक्का सामेल छ । उत्कृष्ट प्रर्दशन १ सय १३ छ ।